Dib-u-milicsi: Burburkii Soomaaliya yaa ka dambeeyey? | Warbaahinta Gobollada Sool Sanaag Cayn
Dawladdii kacaanka ahayd ee uu hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre in ka badan 20 waxaa la riday 27 kii bishii Janaayo 1991 ka dib markii mucaarad hubaysani si xoog ah uga saareen magaalo-madaxdii dalka Muqdishu. Xoogagga mucaaradka oo ka koobnaa SNM (Isaaq), USC (Hawiye), SSDF (Majeerteen), iyo SPM (Ogaadeen) ma lahayn ama kama dhaxayn qorshe ay dalka ku maamuli karaan iyo heshiis dhexdooda ah midna oo aan ka ahayn in xoog lagu rido taliska Maxamed Siyaad Barre. Taasi waxay keentay in la waayo dawlad hanata maamulka dalka iyo in ay dib u heshiin ku soo dabbaasho qabaailka Soomaaliyeed.
Waxaa waxaa dagaalkaas ku burburay wax kasta oo ahaa agabkii iyo hantidii dawladda; waxaa dhulka lala simay dhismayaashii dawladda; waxaa la boobay dhammaan hantidii qaranka. Sidaas si la mid ah waxaa dhac iyo burbur loo geystey hantidii guud iyo tii gaarka ahayd ee dadka Soomaaliyeed ee Xamar taallay. Dil, dhac, iyo boob mid looma miidaan dayin, kala dambayntiina faraha ayay ka baxday.
Haddaba waxaannu halkan idiinku soo gudbinaynaa oo aan jecelnahay in aad nala daawataan muuqaal (video) ina tusaya ama ka warramaya halka xaaladda siyaasadeed ay maraysay iyo talo-xumadii ka dhaxaysay mucaaradkii la wareegay Xamar.